ကားရိုက်မရှိလို့ ကလေးစရိတ်တောင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်...! - Thadin
HomeCELEBRITYကားရိုက်မရှိလို့ ကလေးစရိတ်တောင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…!
May 16, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ကားရိုက်မရှိလို့ ကလေးစရိတ်တောင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…!
မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဇာတ်ပို့အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာဗီဒီယိုဈေးကွက်ယိုယွင်းလာမှုဒဏ်တွေကိုခံနေရတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တစ်ယောက်ကိုတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူကနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူကြုံတွေနေရတဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်။သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောချင်လွန်းလို့ မိတ်ဆွေတွေကို သိအောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လတ်တလေ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို“ဘာမှမရှိပါဘူး။မနေ့ကမှကျိုက်ထိုကဖျော်ဖြေပြီးပြန်လာတာပါ။ကျိုက်ထိုရိုးရိုးလေး ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲပေ့ါနော် ကိုကြီးခင်လှိုင်တို့အဖွဲ့နဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ကိုဟဲလေးတို့နဲ့ချစ်ငယ်တို့နဲ့သီချင်းဆိုပြီးတော့ ပြန်လာတာပါ။”လို့ပြောပြသွားတဲ့အပြင်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပျက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း “အနည်းငယ်အခက်အခဲမဟုတ်ဘူး။
အရမ်းကြီးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာသိသလောက်တော့။ဒါပေမဲ့တချို့စက်အဖွဲ့တွေ ကျတော့လည်းမြင်ခဲ့တာဇာတ်လမ်းတွဲတွေဘာတွေမှာပြန်လုပ်နေတယ်။သူတို့ကိုတွေ့လိုက်တော့စိတ်အေးသွားတယ်ပေါ။တချို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်တွေ၊လူကြမ်းတွေအရမ်းကိုတိုင်တွေပတ်နေကြတယ်။ဘာအလုပ်မှာလဲမရှိကြဘူး ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းကြားတယ်။ သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်။
ကလေးကျောင်းစရိတ်တွေနဲ့တလတလ ပေါအဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်လခတွေနဲ့ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သမီးတို့စိတ်ထဲမှာသမီးတို့လောကကြီးအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သမီးတို့မထင်ထားဘူးပေါ့။သမီးကိုပြောတယ်။နင်တို့ဘာလို့ မစုခဲ့မဆောင်းခဲ့တာလဲ အရမ်းရယ်ချင်ပါတယ်။ သမီးတို့ဘယ်လောက်ရလို့လဲလို့ စုရအောင်လေ။ ကလေးစရိတ် ၊ အိမ်စရိတ်တွေနဲ့သမီးတို့ရတာလေးနဲ့က ကွက်တိတောင်မကျဘူး လိုတောင်လိုနေသေးတယ်။
အဆမတန်လည်းကွာတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကို ဒါပေမယ့်ကျေနပ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးကြီး ကိုယ့်လောကကြီးရပ်သွားမယ်လို့ပျက်သွားမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့။အခုတော့နှိုင်းယှဉ်ကတော့ဒီကားရိုက်မရှိတဲ့အချိန်ဆိုသီချင်းဆိုတတ်နေတော့ပွဲလေးတွေတော့ဆိုဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ခုမဟုတ်ကတော့တက်နဲ့မရလည်းလက်နဲ့လှော်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီ ”ဆိုပြီးပြောပြသွားပါတယ်။
မွနျမာဗီဒီယိုဇာတျလမျးတှထေဲမှာဇာတျပို့အနနေဲ့သရုပျဆောငျခဲ့ပွီးအခုခြိနျမှာဗီဒီယိုဈေးကှကျယိုယှငျးလာမှုဒဏျတှကေိုခံနရေတဲ့သူတှထေဲကတဈယောကျဖွဈတဲ့နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျတဈယောကျကိုတော့သိကွမယျထငျပါတယျ။သူကနဲ့အငျတာဗြူးတဈခုမှာသူကွုံတှနေရေတဲ့ဘဝဖွတျသနျးမှုအခွအေနတှေကေိုပွောပွသှားပါတယျ။သူပွောပွသှားတဲ့အကွောငျးတှကေိုပွောခငျြလှနျးလို့ မိတျဆှတှေကေို သိအောငျပွောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကလေးကြောငျးစရိတျတှနေဲ့တလတလ ပေါအဲ့ဒီလိုမြိုးအိမျလခတှနေဲ့ ဖွဈနတေယျပေါ့။အဲ့ဒီလိုမြိုးတှဖွေဈနတေယျဆိုတော့ သမီးတို့စိတျထဲမှာသမီးတို့လောကကွီးအဲ့လောကျကွီးဖွဈသှားလိမျ့မယျလို့သမီးတို့မထငျထားဘူးပေါ့။သမီးကိုပွောတယျ။နငျတို့ဘာလို့မစုခဲ့မဆောငျးခဲ့တာလဲအရမျးရယျခငျြပါတယျ။သမီးတို့ဘယျလောကျရလို့လဲလို့စုရအောငျလေ။ကလေးစရိတျ၊အိမျစရိတျတှနေဲ့သမီးတို့ရတာလေးနဲ့ကကှကျတိတောငျမကဘြူးလိုတောငျလိုနသေေးတယျ။
ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်သောအခါ…!
This Month : 37419
This Year : 232817
Total Users : 591841
Total views : 2716198